I-Huawei isungula inkqubo ye-Q Q ye-Android Q ye-Mate 20 Pro | I-Androidsis
I-Huawei isungula inkqubo ye-Q Q ye-Android Q ye-Mate 20 Pro
UGoogle uthathe izinto ezisongelayo I-Android Q Beta 3 Kwinkomfa yonjiniyela ye-I / O kaGoogle ka-2019.Ukulandela oku, iHuawei ngoku ikhangele abaphuhlisi ukuba bathathe inxaxheba Inkqubo yokuQashwa koMqokeleli we-Android Q.
Inkqubo ijolise ukukhawulezisa uphuhliso lwe-Android Q beta kwizixhobo zeHuawei, ukuqala nge Umlingani 20 Pro, eya kuba yeyokuqala ukuba yinxalenye yayo.
Kunye nophuculo lwe-beta ye-Android Q, IHuawei iya kuguqula ukhuseleko kunye nokukhuseleka kwemfihlo yomsebenzisi. Inkampani iceba ukuthintela ukuqokelelwa kwedatha phakathi kwezicelo, ngokusekwe kwiimfuno zomsebenzisi. Olu phuhliso lutsha luya kuqhuba ulawulo olungcono kwizixhobo zakho.
Kukho olunye utshintsho oluninzikubandakanya inkqubo ye-Android Q ebanzi yendlela emnyama, ukuphucula impilo yedijithali, kunye nolawulo lwabazali, oluya kuba yinxalenye yovavanyo oluzayo lwe-beta.
Iimpawu ze-Android Q ezinje ngenkxaso yemveli ye-5G kunye nenkxaso ye-smartphone enokusongelwa iya kwandiswa ngenxa yezixhobo ezinje nge Huawei Mate X.
Unomdla kwi-Mate 20 abanini pro abanokucela uVavanyo lobuhlobo loMsebenzisi ngokulandela le miyalelo ikhankanywe ngezantsi:
Khuphela isicelo seHuawei Beta Club kwisixhobo sakho.
Yamkela iMiqathango neMiqathango ngaphambi kokungena kwi-ID yakho yeHuawei.
Emva kokungena Joyina iphulo leBeta, Yiya e Personal > Joyina iProjekthi > Iprojekthi ekhoyo.
Nje ukuba kwenziwe oku, uyakufumana ngokuzenzekelayo isaziso sohlaziyo lwe-OTA.
El I-Huawei Mate 20 Pro Iphakathi kweeflegi zokuqala ze-Android ezidwelisiweyo ukufumana uhlaziyo lwe-Android Q kwakamsinya nje ukuba iphehlelele. Ukuba ufuna ukuphuma kwinkqubo ye-Beta, yiya kwa-Huawei Beta Club kwaye uphume kwiprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Huawei isungula inkqubo ye-Q Q ye-Android Q ye-Mate 20 Pro